Umculo onokukunceda ubhale izicatshulwa zakho zoncwadi | Uncwadi lwangoku
Namhlanje ndikuzisela elinye lala manqaku endithanda ukuwabhala amaxesha ngamaxesha. Sisindululo sobuqu ukuze namhlanje sincede abo bafundi basilandelayo nabathi, ukongeza ekufundeni njengomdlalo wokuzonwabisa, nabo babe nokufunda. kubhala. Kwaye nditsho into endiyithandayo, kuba nangona ukubhala kungumsebenzi kunye nomsebenzi wabaninzi, ihlala izalwa njengomdlalo wokuzonwabisa, njengemfuneko ... Ngaba kunokwenzeka ngenye indlela?
Ukulandela isihloko esisichaphazelayo namhlanje, ndiza kuthetha 'uluhlu lokudlalwayo' okanye amagcisa ngakumbi endimamelayo, nokuba ndibhala inqaku apha okanye elinye ibhlog, okanye xa ndibhala kwincwadi yam yamanqaku okanye kwiprojekthi endisandukuyiqala. Ziphose kuyo!
'Uluhlu lwadlalwayo' endilulandelayo
Ukuthetha 'ngohlu lokudlalwayo' oludumileyo esilulandelayo kwinkqubo nganye okanye kwenye, kuya kufuneka ndikhankanye ezintathu:
lokudlala 'Ipiyano enoxolo' de Spotify: Enye yeentando zam kwaye endikhetha ukuhlala ndibhala. Okwangoku zilayishwe zizonke Iiyure ezisixhenxe nemizuzu engama-7 yomculo, yonke ipiyano ngokupheleleyo. Ipiyano sisixhobo, kunye nomculo wevayolus onokuthi uphumle kwaye undikhuthaze xa kuziwa ekubhaleni. Kolu 'luhlu lokudlalwayo' ungafumana kwisandi somdlalo bhanyabhanya odumileyo kwaye ulunge kakhulu "Amélie" ukusuka kuYann Tiersen, kwabanye abanye abavela "kuMdlalo weZihlalo zobukhosi" ngezinye izinto ezingaziwayo endizithandayo, ezinje Ubomi obude nguNovo Talos okanye "Ukuhamba" NguJames Spiteri. Kucetyiswa kakhulu!
lokudlala 'Uxinzelelo lweRock ye-Indie', nayo isuka Spotify: Kukho ngoku okulayishiwe Amaculo ali-50. Itotali Iiyure ezisixhenxe nemizuzu engama-5 yomculo. Ndihlala ndibeka olu luhlu lokudlalwayo kakhulu, lufutshane kakhulu ukuze endaweni yokuphuma emgceni kunye namazwi ayo kundinceda ndicinge kwaye ndibhale.
lokudlala 'ICafé del Mar-Ukuphela konyaka uxube ngo-2016' ziyafumaneka zombini Youtube njengoko Spotify. Umculo okumnandi ngakumbi kunoko ukulandela ngaphezu kwayo nayiphi na into Ukuphumla kunye ingqalelo.
Kwaye ukuba lwahlu lwadlalwayo Ezangaphambili azisebenzi kuwe, ungazama naliphi na kula magcisa okanye maqela ama-3 alandelayo:
Ndithelekelele: Eli bhanti laseBritane liya kukukhuthaza ngokupheleleyo, ngenxa yeengoma zalo kunye nesingqisho salo. Ewe umculo okhethekileyo onokuwuthanda okanye uwuthiye, andiqondi ukuba kukho umhlaba ophakathi.
UMichael Nyman: Yonke into ebhalwe ngumdlali wepiyano kufanelekile ukuyimamela hayi kuphela xa ebhala. Kucetyiswa kakhulu ngazo zonke iiyure.
ILark Bentley: Le mvumi yomculo waseSpain inomculo ocekeceke, awuthengisi kakhulu kwaye ukuba uyayiqonda kwaye uyayithanda, inokukukhuthaza kakhulu xa kufikwa ekubhaleni. Ndadibana naye kwiminyaka emininzi eyadlulayo kwaye ukusukela oko ndadibana naye, andikayeki ukummamela.
Ndimamela umculo omninzi kunokuba ndibeke apha ngokucacileyo kodwa ezi zilapha ndiyakuqinisekisa ukuba zezona ziphindaphindayo kwimeko yam ukubhala. Ndiyathemba ukuba awuyithandi nje kuphela kodwa ikwanceda nakwimisisi kunye noxinzelelo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Umculo onokukunceda ubhale
Ipiyano enoxolo, sisincomo esihle kangakanani, enkosi kakhulu
Yintoni efundwa ngababhali bethu abathathu